OZI onye nkuzi isi
Abụ m Alex Reed, onye isi nkuzi ebe a na Manchester Communication Primary Academy (MCPA), daalụ maka iwepụta oge iji chọpụtakwuo gbasara anyị.
Ụlọ akwụkwọ anyị bụ obodo na-enweghị atụ, nke nwere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, ezinụlọ na ndị ọrụ ibe dị iche iche mejupụtara. Anyị ọnụ, anyị na-agbasi mbọ ike ịhụ na ụmụ anyị niile rụzuru ihe kacha mma ha nwere ike ime. A na-enweta nke a site na nkuzi na mmụta mara mma, mmetụta mmekọrịta ọha na eze miri emi site na ụdị nkwado ezinụlọ ọhụrụ, yana usoro ụlọ akwụkwọ niile dabara nke ọma maka ịzụlite.
Usoro 6 nke nzụlite na-akwado usoro anyị, nke na-ahụ na anyị na-etinye nwa ahụ na ọdịmma ha mgbe niile n'etiti mkpebi ọ bụla:
1. A na-aghọta mmụta ụmụaka na mmepe
2. Klas na-enye ntọala nchekwa
3. Mkpa ọ dị ịzụlite maka mmepe nke ọdịmma
4. Asụsụ bụ ụzọ nzikọrịta ozi dị mkpa
5. Omume niile bụ nkwukọrịta
6. Mkpa mgbanwe na ndụ ụmụaka
Ewubere usoro ọmụmụ na MCPA nke ọma iji hụ na ọ na-etolite ụmụ akwụkwọ n'otu n'otu, na mgbakwunye na ihe ọmụma na nkà ha n'ụdị isiokwu sara mbara na nguzozi. Ihe akaebe na-eme ka usoro nke usoro ọmụmụ anyị mara ma hụ na a na-eji ihe ọmụma dị ike nke mbụ akwado mmụta. Ihe si na nke a pụta bụ na ụmụ anyị na-eme nke ọma, na-aga n'ihu na-enweta nnukwu ihe na mmụta nwere ike ịgafe n'enweghị nsogbu na Manchester Communication Academy.
Dị ka akụkụ nke Greater Manchester Academies Trust, anyị na-enwe ike ịkpụzi njem mmụta nke ụmụaka site na afọ 3, ruo n'ịbụ okenye - site na nwata ruo n'ọrụ.
Enwere m nnukwu mpako maka ụlọ akwụkwọ anyị, obodo nke ọ ghọworo, ezinụlọ anyị na ụmụ akwụkwọ anyị, na ndị otu anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ. Anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile igosi ya, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịbịa hụ MCPA n'onwe gị, kpọtụrụ!
Chọpụta ihe ụmụ akwụkwọ anyị na ndị ọrụ MCPA na-emebu site na ịpị ebe a